Fanafody fandrindram-piterahana: 20% ny vehivavy tsy afaka nisitraka izany - ewa.mg
News - Fanafody fandrindram-piterahana: 20% ny vehivavy tsy afaka nisitraka izany
Nidina ho 32% ny
tahan’ny fampiasana ny fanafody fandrindram-piterahana teo amin’ny
vehivavy raha efa tafakatra 39% izany.
Tsy tratra ny tanjona 50% ho an’ity taona 2020 ity noho
Nisy fiantraikany tamin’ny
fahazoan’ny vehivavy nanohy ny fanabeazany aizana ny fiparitahan’ny
valanaretina Covid-19 maneran-tany sy teto amintsika manokana.
Natahotra ny hivezivezy teny amin’ny tobim-pahasalamana na koa tsy
afaka nivoaka noho ny fepetra ara-pahasalamana izy ireo. Nihena 20%
ny andriambavilanitra nahazo tolotra ara-pananahana ary nitombo ny
vohoka tsy niriana ho an’ny salan-taona 15 -19 taona, araka ny
fanazavan’ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Marie Stopes
Madagascar, Razafinirinasoa Lalaina, omaly nandritra ny
fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny fandrindram-piterahana.
Anisan’ny fanafody be mpisafidy ny « implanon » asisika
eo amin’ny sandry ka nandritra ny volana jolay sy aogositra. Niato
ny fahatongavan’ny tahiry satria nikatona ny seranam-piaramanidina.
20 000 isam-bolana teo ho eo ny tsy afaka nisitraka izany, efa
niverina ny famatsiana ankehitriny. Laharam-pahamehana ho an’ny
MSI, manomboka izao, ny fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana
sy fisorohana ny vohoka tsy niriana eo amin’ny zatovovavy. Efa
niakatra ho 22% ny tahan’ny tanora mampiasa fanafody
fandrindram-piterahana amin’ny vehivavy tokony hahazo ny tolotra,
amin’izao fotoana izao. Nanampy betsaka ny MSI ny fahalanian’ny
lalàna vaovao manome alalana ny tanora hahazo vaovao sy tolotra
momba ny fandrindram-piterahana, ny taona 2019.
12 taona mitondra vohoka
Amin’ny tanàn-dehibe, mahazo vaovao
sy ny torohevitra momba ny fiarovana amin’ny vohoka aloha loatra sy
tsy iriana ny zatovovavy, any ambanivohitra sarotra ny fampitana ny
fanentanana ary 12 taona ny fotoana voalohany hirosoan’ny ankizy
amin’ny firaisana ara-nofo. Izay no nahatonga ny fanamarihana atao
any amin’ny faritra AtsimoAtsinanana, distrikan’i Farafangana.
Nanao antso ho an’ny fanjakana ny
MSI tsy hanadino ny fanenkena efa nataony hanao laharam-pahamehana
ny fandrindrana ny fiterahana mba hirindra ny fiakaran’ny
harinkarena sy ny isan’ny zaza teraka.
L’article Fanafody fandrindram-piterahana: 20% ny vehivavy tsy afaka nisitraka izany a été récupéré chez Newsmada.
Fikarohana momba ny ady amin’ny tazomoka: Mendrika ny Pr Randrianarivelojosia Milijaona
Reharehan’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny fikarohana ny nahazoan’ny Pr Randrianarivelojosia Milijaona ny loka sy fankasitrahana avy amin’ny CDC mikasika ny ady atao amin’ny valan’areina tazomoka.Nahazo ny loka avo lenta avy amin’ny ivotoerana Centers for Diseases Control (CDC) ny profesora Randrianarivelojosia Milijaona, mpikaroka ao amin’ny Institut Pasteur de Madagascar sy ny Dr Laurence Baril, lehiben’ny sampan fikarohana sy hay areti-mifindra.Mendrika tamin’ny fanaovana fikarohana mikasika ny tohitra amin’ny fanafody tazomoka izy mianadahy ireo.Anisan’ny firenena mandray anjara ao amin’ny Antimalarial Resistance Alliance (Parma) i Madagasikara. Tetikasa miady amin’ny fiparitahan’ny valan’aretina tazomoka io Parma io. Manara-maso sy mandihady ny haavon’ny tohitra amin’ny fanafody ampiasaina itsaboana ny tazomoka no tena hataon’izany tetikasa izany .Teto Madagasikara, maherin’ny 1 tapitrisa ireo fantatra fa nararin’ny tazomoka tamin’ny enim-bolana voalohany tamin’ity taona 2020 ity. 600 tamin’ireo no namoy ny ainy rehefa tsy nahazo fitsaboana ara-potoana.Ny fitsaboana haingana ny aretina no mampihena ny fihombon’ny arerina. Tsy tokony hiandry efa tena marary mafy vao manatona toeram-pitsaboana. Azo sitranina tsara ny aretina tazomoka rehefa voatsabo ara-potoana ny marary.Anisan’ny miandraikitra betsaka amin’ny ady amin’ny tazomoka eto amintsika ny tetikasa Impact ao amin’ny USAID. Nisy ny fanomezana fitaovam-pitiliana TDR an-tapitrisa avy amin’ny governemanta amerikanina naparitaka amin’ireo toerana tena be tazo hahafahana manao fitiliana haingana mora handraisana an-tanana ireo marary.Eto Madagasikara mbola maro ireo toerana ahitana ny aretina tazomoka. Efa misy ny hetsika fizarana lay maimaimpoana isan-tokantrano amin’ireny faritra ireny saingy tsy ampiasain’ny olona amin’ny tokony ho izy ny lay ka manjary zava-poana ny ezaka atao.Tatiana AL’article Fikarohana momba ny ady amin’ny tazomoka: Mendrika ny Pr Randrianarivelojosia Milijaona a été récupéré chez Newsmada.
Tra-tehaky ny polisy nanao fanamiana sivily, teny Tsimbazaza, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny lehilahy iray voalaza fa anisan’ireo jiolahy nanafika mpivady mpandraharaha tany Maevatanàna tamin’ny oktobra 2018. Fantatra fa anisan’ireo olon-dratsy mpanakan-dalana eny amin’ny lalam-pirenena fahafito sady mpanao fakana an-keriny, any Maevatanàna izy. L’article Fahatrarana olon-dratsy est apparu en premier sur AoRaha.
Fampivelarana ny kabary: hotohizana ny « Takariva dinika amorom-patana »
Anisan’ny hevitra nitsiry tao anatin’ny fotoana nandiavana ny hamehana ara-pahasalamana ny fanatanterahana hetsika « Takariva dinika amorom-patana ». Fantatra fa hotohizan’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany (Fimpima maneran-tany) izany ka isaky ny tapa-bolana ny hanatanterahana azy. Somary efa mitaky lenta avoavo kokoa amin’ny fahaizana kabary ny « Takariva dinika amorom-patana », noho izany, hasaina manokana ireo efa mpikabary, raha ny fanazavan’ny filohan’ny birao foibe Fimpima maneran-tany. Hanatevina ny fahalalany avy amin’ny alalan’ity hetsika ity izy ireo.Tohizina amin’ny 8 septambra izao ny andiany manaraka. Amin’ny alalan’ny “zoom” sy ny facebook no hanatanterahana izany. Azon’ny rehetra arahina tsara. Azo atao tsara ihany koa ny manatrika mivantana ao anaty efitrano hanatanterahana ilay dinika. Miankina indrindra amin’ny fepetra tsy maintsy arahina amin’izao fisian’ny hamehana ara-pahasalamana izao ny fanatanterahana izany, raha ny fanazavan’Andriamboavonjy Hanitra hatrany.HaRy RazafindrakotoL’article Fampivelarana ny kabary: hotohizana ny « Takariva dinika amorom-patana » a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: Situation du 20.07.2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Covid-19: Situation du 20.07.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.L’article Covid-19: Situation du 20.07.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
BEPC sy Bacc : nofoanana ny adina ara-panatanjahantena
Nofoanana ny adina ara-panatanjahantena ho an’ny fa­nadinam-panjakana roa, ny BEPC sy ny bakalorea, amin’ ity taona ity, araka ny fanambaran’ny minisitry ny Fa­mpianarana ambony sy ny filazana nataon’ny minisiteran’ny Fanabeazana tamin’ ny tambajotra sosialy, oma­ly.Nilaza ny minisitry ny Fa­mpianarana ambony, i As­soumacou Béatrice fa tsy ampy fanomanan-tena ny mpi­adina noho ny hamehana sy ny fihibohana ka mety hi­teraka fahasembanana ara-batana amin’ny fanadinana izany. Ny taranja iraisana rahateo mety ho loharano hamindra ny tsimokaretina Coro­na­virus. Ny filoha ihany koa mbola nanamafy, nandritra ny tafa farany (23 aogositra) tamin’ny vahoaka fa tsy mbola azo tanterahina ny fi­faninanana ara-panatanjahantena samihafa. Vokany, tsy misy ny adina ho an’ny taona 2020 manokana. Mbo­la izay antony ara-pahasalamana izay koa no naroson’ny minisiteran’ny Fanabeazana tsy ahafahana manatontosa ny adina ara-panatanjahantena ho an’ny BEPC. Taranja azo isafidianana ho an’ny mpiadina BEPC ny fanatanjahantena fa manampy amin’ny naoty ankapobeny raha mahazo mihoatra ny 10/20 ny mpiadina. Ho an’ny Cisco Antananarivo Renivohitra, na­hatratra 294 no nisafidy ny hanao ny adina ara-panatanjahantena, tamin’ity taona ity ary saika lomano avokoa ny taranja safidy nataon’olona tokana.Vonjy A.L’article BEPC sy Bacc : nofoanana ny adina ara-panatanjahantena a été récupéré chez Newsmada.
Kaominina Antananarivo Renivohitra :: Manameloka ny fihetsiky ny Ben’ny tanàna ireo mpanolotsaina TIM
Nanao fanambaràna tetsy amin’ny Bel’Air Ampandrana ireo mpanolotsaina monisipaly voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), omaly. Nomelohin’izy ireo ny fomba fitantanan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra (CUA), Andriantsitohaina Naina, sy ny fandraisan’itsy farany fanapahan-kevitra samirery hatrany na dia efa lavin’ny filankevitra monisipaly aza izany. Isan’ireo nokianin’izy ireo manokana ny famoahana naoty matetika ataon’ny Ben’ny tanàna, toy ny fampitsaharana ny fifanarahana fampidramana tany etsy Anosimpatrana, izay iorenan’ny orinasa MBS; ny fandrodanana an’ireo fotodrafitrasan’ny kaominina, izay voalaza fa ara-dalàna raha araka ny fifanarahan’ny CUA sy ireo mpampiasa azy ary ny fanesorana an’ireo mpivarotra mampiasa sy manofa an’ireo tsena etsy amin’ny Esplanade Analakely. « Tsy fahefan’ny ben’ny tanàna ny manova na manafoana ny fanapahan-kevitry ny filankevitra monisipaly amin’ny alalan’ny famoahana naoty. Natao hanaraka ny fanapahan-kevitra monisipaly ny ben’ny tanàna, araka ny voafaritry ny andininy faha16 amin’ny lalàna 2015-011, tamin’ny 1 avrily 2015, mikasika ny satan’ny CUA. Tsy manana fahefana hanapaka fifanarahana fanofana tany koa ny ben’ny tanàna, fa andraikitry ny filankevitra monisipaly avokoa izany salovaniny izany », hoy izy ireo, omaly. Miantso ny ben’ny tanàna mba hanova fomba fiasa ireto mpanolotsaina ireto. Nisafidy ny tsy hamaly an’izao hafatr’ireo mpanolotsaina izao koa ny mpiaramiasa akaiky amin’ny ben’ny tanàna. « Avelao ry zareo haneho ny heviny », hoy fotsiny Ramanambintana Richard, tale misahana ny andrimpanjakana eo anivon’ny kaominina Antananarivo renivohitra. L’article Kaominina Antananarivo Renivohitra :: Manameloka ny fihetsiky ny Ben’ny tanàna ireo mpanolotsaina TIM est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy hisangy na hamela ny gaboraraka amin’izao ny fanjakana na efa foana aza ny hamehana ara-pahasalamana. Namoaka didy ny eo anivon’ny prefektioran’Antananarivo sy ny governoran’Analamanga fa hilatsaka ny sazy amin’ireo tsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana.Nanterin’ny fanambarana fa tsy maintsy hajaina sy harahina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana na ilay antsoina hoe: “gestes barrières” rehetra hisorohana ny fihanaky ny tsimokaretina Covid-19. «Didina ny tsy maintsy anaovana arovava orona. Hiteraka sazy amin’ny alalan’ny fanaovana asa iombonana ny tsy fanarahana izany fepetra izany ho an’ny eto Antananarivo sy ny faritra Analamanga manontolo », hoy ny fanambarana ny faran’ny herinandro teo. Nialohavan’ny fifampidihinana teo amin’ny roa tonta izany famohanana didy sy ny tsy maintsy mbola hanajana ny fepetra izany.Ho avy amin’ny angady sy ny harona ary ny kifafaMidika izany fa efa eny am-pelatanan’ny mpitandro filaminana izany toromarika avy amin’ny prefektiora sy ny fiadidiana ny faritra izany ka ho avy amin’ny angady sy ny harona ary ny kifafa indray izy ireo, manomboka anio. Hanasazy ireo tsy manaraka fepetra na eny an-dalana na anaty fiara fitaterana…Efa mivaha tanteraka sy tsy voahaja intsony ireo fepetra taorian’ny nanambaran’ny filoham-pirenena fa foana ny hamehana ara-pahasalamana. Tsy ny eto an-dRenivohitra na ny manodidina ihany fa any amin’ireo faritra mbola ahina ny ho fihanaky ny valanaretina.Tokony samy handray fepetra koa ny any amin’ny faritraTokony samy ho hentitra handray fepetra, tahaka izany, koa ireo any amin’ireny distrika sy faritra ireny, araka ny efa nanambaran’ny filoha izany.Mazava ny teny famerimberin’ny tompon’andraikitra. « Aza ny sazy sy ny mpitandro filaminana no atahorana fa fiarovana ny tenanao sy ny hafa ». Tsy mbola fantatra rahateo ny fotoana tena haharesena tanteraka io valanaretina io.Synèse R. L’article Hentitra ny prefet sy ny governoran’Analamanga: “Hosazina avokoa ireo tsy manao arovava orona…” a été récupéré chez Newsmada.
Taom-pianarana vaovao eny amin’ny EPP: haharitra iray volana ny fijerena ny fari-pahazain’ny mpianatra
Niteraka olana ho an’ny talen’ny EPP ny fanambaran’ny filoha fa hohefain’ny fanjakana ny karaman’ny mpampianatra Fram rehetra ho an’ny telo volana voalohany. Nisantatra ny taom-pianarana vaovao 2020-2021 ny ambaratonga telo ho an’ny sekolim-panjakana, nanomboka ny alatsinainy lasa teo, araka ny toromariky ny minisitera mpiahy. Ho an’ny EPP Antanandrano, Cisco Avaradrano, mbola manao cours de remise à niveau (Cran) avokoa ny kilasy rehetra aloha, mandritra ny iray volana voalohany ary eo no hijerena ny fari-pahazain’ny mpianatra tsirairay. Mety mbola hivarina kilasy ambany ireo tsy maharaka hitsinjovana ny hoaviny, hoy ny talen-tsekoly. Efa nahazo toromarika avokoa ny mpanabe rehetra momba ny Cran ary fomba fiasa mahazatra rahateo izany. Nitombo 50 ny isan’ny mpianatra raha nitaha ny tamin’ny taon-dasa ary nisy ny lamina napetraka handraisana azy ireo. Eo an-dalam-panamboarana koa ny efitrano fianarana sasany ka mifandimby mianatra ny ankizy aloha amin’izao. Hatramin’ny omaly, tsy mbola tonga teny anivon’ny sekoly ny fitaovam-pianarana sy ny aron’akanjo ary ny kiraro nampanantenain’ny fitondrana. Toy izany koa ny vola hampihodinana ny fampianarana amin’ny ankapobeny, hoy ny tale. Nisy ny fivoriana niarahana tamin’ny ray aman-dreny, ny alatsinainy, naharitra ora roa nanazavana ny tsy maintsy hanefan’ny ray aman-dreny ny latsakemboka hanomezana ny karaman’ny mpampianatra Fram enina tsy mahazo tambin-karama avy amin’ny fanjakana. Ireo ray aman-dreny 50 efa nandoa ny vola no nanentana ny namany 250 hafa sy nanazava ny antony handoavana ny sora-bola na eo aza ny filazan’ny filoham-pirenena fa raisin’ny fanjakana an-tanana ny fandoavana izany karama izany. Ho sarotra amin’ireo ray aman-dreny ny handoa ny vola latsakemboka aorian’ny fetin’ny faran’ny taona ka manentana azy ireo tsy hiandry ny volana janoary ny tompon’andraikitra. Niravona ihany ny olana ka tapaka fa hanefa ny latsakemboka izy ireo. 200 000 Ar isam-bolana isanisany no karaman’ny mpampianatra Fram enina ao amin’ny EPP.Ho an’ny EPP iray eto an-dRenivohitra, nozaraina, omaly, ny fitaovam-pianarana sy ny kitapo ary ny aron’akanjo ho an’ny mpianatra rehetra efa nisoratra anarana. Haharitra efatra herinandro ny Cran ary hotombanana ny fari-pahaizain’ny tsirairay.Vonjy A.L’article Taom-pianarana vaovao eny amin’ny EPP: haharitra iray volana ny fijerena ny fari-pahazain’ny mpianatra a été récupéré chez Newsmada.